भान्छाका सामाग्री बाटानै बनाउनुस अनुहार चम्किलो अनि सुकिलो - SamacharpatiSamacharpati
भान्छाका सामाग्री बाटानै बनाउनुस अनुहार चम्किलो अनि सुकिलो
प्रकाशित मिति: 2075 मंसिर 18 मंगलबार(December 4, 2018) 3:08 PM बजे Posted By: Samacharpati
१८ मंसिर l
अनुहार चम्किलो, मुलायम, सुकिलो कसरी बनाउने ? संभवत यही प्रश्नले लखेटेर तपाईलाई कहिले ब्युटी पार्लर पुर्‍याउँदो हो वा कस्मेटिक्स बजारमा ।
सौन्दर्य बढाउने अनेक कृतिम उपाय छन् । पार्लर छन् । स्किन अस्पताल छन् । बजारभरी छ्यापछ्याप्ती सौन्दर्य प्रसाधन छन् । यी सबैबाट तपाई/हामी आफुलाई आकर्षक, राम्रो/राम्री देखाउने यत्न गर्न सक्छौं ।
जमना व्यक्तित्वको छ । आकर्षक व्यक्तित्वको यहाँ खास मूल्य छ । त्यसैले झट्ट हेर्दा आकर्षक, सफाचट, चम्किलो देखिनैपर्‍यो । तर, यसका लागि कस्मेटिक्स टि्रटमेन्ट एकमात्र विकल्प होइन । साथसाथै के पनि होइन भने, यसरी प्राप्त गरिने सौन्दर्य दीगो र प्राकृतिक पनि होइन । यी सबै विधी कृतिम तौर-तरिका हुन् ।
पत्याउनुभएन ? साँच्चै हो किचनमा यस्ता कैयौं चीजहरु हुन्छन् जसको प्रयोगले तपाईं रुखो र कडा छालालाई पनि बेदाग, चमकदार र मुलायम बनाउन सक्नुहुन्छ ।